Agbaze fụọ akwa extrusion igwe - A Dị Mkpa Myọcha na nkpuchi
Agbaze fụọ akwa extrusion igwe - A Dị Mkpa Myọcha na masks Faygo Plast Company gbalịa kacha mma ịlụ ọgụ COVID-19 Agbazekwa fụọ ákwà bụ isi ihe maka masks, ọ bụ nnọọ ike na-na ahịa na-adịbeghị anya. Faygo Plast mepụta elu àgwà gbazee fụọ akwa extrusion igwe ...
Otu onye ahịa nyere iwu 10 Sets Of Extruder For Mask Coth Material
Otu ahịa nyere iwu 10 set nke extruder maka nkpuchi coth ihe! Ugbu a ụbọchị, azụmahịa nke nkpuchi ihu, igwe nkpuchi ihu, ihe nkpuchi ihu na-ekpo ọkụ nke ukwuu na China, n'ihi nje corona. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọ igwe maka ihe nkpuchi ihu na ihe nkpuchi ihu. The igwe price bụ na-...
ọhụrụ mmepụta akụrụngwa-gbazee fụọ ákwà igwe
China na-ata ahụhụ nke ukwuu n'ime ọnwa abụọ gara aga n'ihi ntiwapụ nke Ọrịa Nje Ọrịa Corona 2019. Ọ bụ ezie na ọ na-achịkwa ya ugbu a, ọ gbasaa n'ụwa niile, ọkachasị na mba Europe na North America. ụkọ nke ọgwụ na ahụ ike ihe, karịsịa gbazee fụọ ákwà igwe, bụ pred ...
34th Chinaplas 2020, nke akwadoro ime na Shanghai National Convention and Exhibition Centre na Eprel 21-24, 2020, ga-eyigharịrị ruo August 3 ~ 6, 2020. Daalụ maka nlekọta na nkwado gị nye Fay ...
Plast Alger ngosi
ụlọ ọrụ anyị Faygo Plast ga-aga Plast Alger ngosi na Alger, Algeria n'oge 09-11 Mar, 2020. Ọ bụ ihe ngosi ọkachamara maka ọkpọkọ plastic / profaịlụ / mpempe akwụkwọ extrusion. Bolọ ntu anyị bụ 1A.01, nabata ka anyị kwuo okwu ...
Anyị laghachi ọrụ
Afọ ọhụrụ 2020, ụbọchị kachasị mkpa maka Ezinaụlọ China. Anyị na-ahapụ nzukọ na ntụrụndụ. Onye ọ bụla na-eme ihe ọ bụla o nwere ike ime iji lụso nje corona ọgụ. Biko mee akụkụ gị eyi ihe nkpuchi; saa aka gị ugboro ugboro ma zere ịchịkọta. FAYGO UNION guzobere ụlọ ọrụ na-egbochi ...
FAYGO UNION egwuregwu bọọlụ nke mbụ
Na Disemba 31st, 2019, FAYGO mere egwuregwu basketball nke gara aga nke ọma mgbe awa abụọ nke asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ nke ekewara n'ime otu 3 iji sọọ mpi.
Pee anwụrụ Production EZIOKWU zigara IRAQ
Weatherbọchị taa bụ 36 degrees Celsius. Companylọ ọrụ anyị ewepụtala eriri akpa ọkpọkọ asatọ maka Iraq. Ọ bụrụ na i lee foto na vidiyo ahụ, ị ​​ga-ama etu ọnọdụ ahụ si dị ọkụ. (Anyị anaghị ekenye onye ọ bụla data gị, ma jiri ya naanị maka ebumnuche ya ...
Eyi gbazee fụọ ákwà mmepụta akara nkpuchi gbazee fụọ ákwà Ndinam igwe
gbazee fụọ ákwà igwe ， eyi gbazee fụọ ákwà mmepụta akara. Aha ọzọ: eyi gbazee fụọ ákwà igwe, eyi gbazee fụọ ákwà Ndinam igwe, nkpuchi gbazee igbu ákwà igwe, wdg Function: gbazee fụọ akwa mmepụta akara na-eji na-emepụta p ákwà, nke nwere obosara ojiji na nke ...
Eyi gbazee fụọ ákwà maka nkpuchi
Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Machine, Single Wall corrugated Pipe Line, Hdpe Ugboro abụọ Wall corrugated Pipe Production Line, Hdpe corrugated Pipe Extrusion Line, Pee / pp / ịkwanyere corrugated Pipe Production Line, Single Wall corrugated Pipe Machine,